I-PT APTT TT FIB -I-Coagulation Rapid Reagent Kit-Point yoVavanyo loKhathalelo-lweSinocare
I-PT APTT TT FIB -Ikhithi yokuGungqa okukhawulezayo yeReagent Kit
[imeyile ikhuselwe] I-APTT / PT / TT / FIB Reagent Kit yenzelwe ukulinganisa ixesha elisebenzayo le-thromboplastin (APTT), ixesha leprothrombin (PT), ixesha le-thrombin (TT) kunye nokujonga ubungakanani be-fibrinogen (FIB).
Ngokwezonyango, ubukhulu becala isetyenziselwa ukukroba ukusilela kwangaphakathi kunye nenkqubo yokuqina, ibonakalise umxholo okanye ulwakhiwo olungaqhelekanga lwe-plasma fibrinogen kunye nokungaqhelekanga kwinkqubo ye-fibrinolytic. Ingasetyenziselwa ukuxilongwa kokuncedisa ukusasazeka kwe-intravascular coagulation kunye ne-fibrinolysis ephambili, ukubeka iliso kunyango lwe-anticoagulant yomlomo, unyango lwe-heparin anticoagulant kunye nonyango lwe-thrombolytic.
Ixesha elisebenzayo le-thromboplastin (APTT) yovavanyo lokuhlola ukufunyanwa kwezinto zangaphakathi ze-coagulation. Ingasetyenziselwa ukukhangela ukusilela kwizinto ezizuzwe njengelifa okanye ezifunyenweyo (VIII, IX okanye XI) okanye ukubona ubukho be-inhibitors ezihambelanayo. I-APTT inokusetyenziselwa ukubonisa ukungabikho kwe-coagulation XII, prokallikrein kunye ne-molecular weight kallikrein. I-APTT yeyona ndlela ikhethwayo yokujonga i-heparin engafunekiyo.
Ngokweklinikhi, ixesha leprothrombin (PT) lisetyenziselwa ikakhulu ukujonga ukusilela kwenkqubo yokugungqa kunye nokubeka iliso kunyango lwe-anticoagulant yomlomo. Nge-PT ende, kunokubakho ilifa into II, V, VII, X ukusilela kunye ne-hypofibrinemia (okanye i-afibrinogenemia); Ukusilela kwento efumanekayo yokuqina kufunyanwa kwi-DIC, i-fibrinolytic hyperactivity, isithintelo se-jaundice kunye ukuswela iivithamini K; nge-PT efinyeziweyo, kunokubakho into e-V egqithisileyo, izinto zokucwangcisa ngomlomo, isifo se-hypercoagulability kunye nezifo ezibangelwa yintsholongwane.
Ixesha le-Thrombin (TT) luvavanyo lokuhlola ukufikelela kubuchule be-plasma fibrinogen yokuguqula ibe yi-fibrinogen. Ngexesha elide le-TT, kunokubakho ukwanda kwe-heparin, ubukho be-heparin anticoagulant, efana ne-hepatopathy, izifo zezintso, njl .; i-hypofibrinemia (okanye i-afibrinogenemia), i-frinogenemia engaqhelekanga, inyuse i-FDP, enjenge-DIC, i-fibrinolysis ephambili, njl njl.
I-fibrinogen ephezulu (i-FIB) ihlala ifumaneka kwigazi elixinene kakhulu, elijongwa kwizigulana ezinesifo seswekile, okanye izigulana ezine-infyoction ye-myocardial, kunye nesifo se-cerebrovascular, kunye nokukhulelwa okubangelwa luxinzelelo lwegazi, njl. I-coagulopathy yokutya okanye i-fibrinolysis), isifo sokuqala se-fibrinolytic, i-hepatitis, i-hepatic cirrhosis, i-hypofibrinemia (okanye i-afibrinogenemia), njl.
Inkqubo yokuphendula kwinqanaba lesiselo, usebenzisa indlela yokujiya ikhokelela kwiziphumo ezichanekileyo
Iziphumo ziyafumaneka kwimizuzu eli-15
I-APTT / PT / TT / FIB